Meydka Soomaali laga helay wadanka Uganda - Caasimada Online
Home Warar Meydka Soomaali laga helay wadanka Uganda
Meydka Soomaali laga helay wadanka Uganda
Muqdisho (Caasimada Online) – Muwaadinkaani la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Axmed Muxsin ayaa waxaa maydkiisa laga helay Degmadda Jinja oo 80-km dhinaca Bari kaga toosan caasimadda dalka Uganda ee Kampala.
Boliska Degmadaasi ayaa sheegay inay baadi-goobayaan kooxihii ka dambeeyey dilka Marxuumkaasi oo 40-jir ahaa.
Marxuumka oo in muddo ah ku nool dalka Kenya ayaa la sheegay in maydkiisa lagu soo tuuray waddo ku tasalla dhul-beereed ku yaalla Tuulladda Masese ee Degmadda Jinja.
Dadka Deegaanka oo u socday beerahooda ayaa arkay maydkiisa oo la dhigay waddo dhinaceeda.
Dhinaca kale, hadal ka soo baxay Boliska Jinja ayaa sheegay inay wadaan baaritaanka kooxihii ka dambeeyey dilkaasi oo aan weli la aqoonsanin, waxayna ugu baaqeen dadka deegaanka inay Boliska soo gaarsiiyaan warbixinadda horseedi kara in la soo qabto shaqsigii ama dadkii ka dambeeyey dilka Marxuumkaasi oo la oran jirey Axmed Muxsin.